Tsy zakan’ny mpitantana ny Jirama ny ady atao amin’ny gaboraraka sy halatra isan-karazany, efa nahatratra mpangalatra 41 ny Pro-GSI- 24H Mada FB du 4 avril 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Non classifié(e)Tsy zakan’ny mpitantana ny Jirama ny ady atao amin’ny...
Tsy zakan’ny mpitantana ny Jirama ny ady atao amin’ny gaboraraka sy halatra isan-karazany, efa nahatratra mpangalatra 41 ny Pro-GSI- 24H Mada FB du 4 avril 2019
Namaly ny DG Jirama ny DG Pro Gsi : Aoka izay ny gaboraraka atao amin’ny orinasam-panjakana Jirama
Saika raikitra ny sakoroka teo anoloan’ny vavahadiben’ny Jirama Bazar Be Tamatave io maraina io( jeudi). Nikiry hiditra hiasa tao ilay orinasam-piambenana antsoina hoe ONG Fihavanana izay voalaza fa nomen’ny Tale Jeneralin’ny JIrama alalana hiambina ny Jirama misolo ny orinasam-piambenana Pro Gsi. Efa nihatrana teo ihany koa anefa ireo agent de sécurité Pro Gsi notarihin’ny Tale jeneraliny, Rakotoninahy Josephat. Ity farany izay niantso mpitandro filaminana manoloana ilay fihetsika lazainy fa manao an-keriny ataon’ny ONG Fihavanana. Nambaran’ny DG orinasam-piambenana Pro Gsi fa tsy manara-dalàna ny fomba fampidirana io Ong Fihavanana io hisolo azy ireo. Misy convention vita sonia mazava tsara nahafahanay nanao ny asa niambina ny orinasa Jirama, hoy izy. Convention, nifanaovana tamin’ny ministera. Convention tsy lany daty. Tonga anefa androany, dia tsy misy taratasy convention entin’ireto milaza fa hisolo anay ireto fa tonga dia miditra “degany”. Nahitsy ny DG Pro Gsi nilaza fa ny DG Jirama ankehitriny no maniraka ireo olona ireo. Hajao ny lalàna. Aoka izay ny gaboraraka. Niezaka izahay Pro Gis nisambotra ireo mpiasan’ny Jirama nangalatra solika sy fitaovana. Nahatratra 41 ireo voasambotray saingy nataon’ny Jirama ny fomba rehetra nanakonakonana ireo mpanao ratsy.
Tsy zakan’ny mpitantana ny Jirama ny ady atao amin’ny gaboraraka sy halatra isan-karazany ka atao ny fomba rehetra anesorana anay amin’ny fomba tsy ara-dalàna. Te hamerina ny gaborabaraka ny DG Jirama. Ampy izay ny akamakama, hoy hatrany ny fanazavany.
Ankoatra ny olana amin’ny tolotra tsy mahafa-po ny mpanjifa, jiro tapatapaka, rano mivadika mena, fidangan’ny vidin-jiro tsy mazava, …dia olana vaovao atrehin’ny Jirama Toamasina amin’izao fotoana ity fampidirana orinasam-piambenana vaovao izay hitrikitrihin’ny Tale Jenerain’ny Pro Gsi fa endrika isiana kolikoly sy fikasana amerina ny gaboraraka. Izy izay nampiseho ireo taratasy sy fifanarahana ary fahazoan-dalana ahafahan’ny Pro Gis miambina ny Jirama.
Vantany nahita ireo mpitandro filaminana tonga ireo mpiambina lazaina fa hisolo ny Pro Gsi dia niala avy hatrany teo amin’ny vavahadiben’ny Jirama Bazar Be.
Ho hita eo ny ho tohiny.
Vaovao Mickaelys Kamy Ndiamahazo
Previous articlePoint en vidéo sur les responsables de l’administration foncière malgache emprisonnés
Next articleTsy ampy ny fanagadrana any Eddy sy Mbola ary Hasimpirenena satria tsy izy ireo ihany no fantatra fa isan’ireo voarohirohy amin’ny halatra sy nanodinkodina volam-bahoaka sy harena teto – La gazette DGI du 4 avril 2019